गोरखाको प्रहरीद्वारा अवैध सालको काठ बरामद | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
गोरखाको प्रहरीद्वारा अवैध सालको काठ बरामद
Published On : १ कार्तिक २०७६, शुक्रबार १७:०४
गोरखा नगरपालिका १० छेबेटारको सानो बगैंचाबाट अबैध काठ बरामद गरिएको छ । गोप्य सुचनाका आधारमा विहिबार खटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाको टोलीले २० थान सालको काठ बरामद गरेको हो । काठ कुन प्रयोजनका लागि कसले राखेको भन्ने पत्ता लाग्न सकेको छैन ।
थप अनुसन्धान तथा कारबाहीको लागी प्रहरीको टोलीले जिल्ला वन कार्यालयमा काठ बुझाएको एसपि ओमप्रकाश अधिकारीले जानकारी दिए । बजार मुल्य अनुसार करीब डेढ लाख रुपैयाँ बराबरका काठ बरामद भएको डिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत महेश पौडेलले बताए ।
४५.४५ क्युफिट रहेको ति काठ सि ग्रेडका रहेका उनको भनाई छ । बरामद गरिएको काठका सन्दर्भमा थप अनुसन्धान गर्न डिभिजन वन कार्यालयले गोरखकाली सब डिभिजन वन कार्यालय १२ किलोलाई पत्राचार गरेको छ । अनुसन्धानका आधारमा थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने सहायक वन अधिकृत पौडेलले जानकारी दिए ।
यसैबिच, गोरखा नगरपालिका ८ को रानीवनका विभिन्न ठाउँमा गाँजा फडानी गरिएको छ । समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाको अगुवाई र स्थानीय बासीन्दाको सहयोगमा गाँजा फडानी गरिएको हो । प्राकृतिक रुपमा उम्रिएको करीब चार सय बोट गाँजा फडानी गरी नष्ट गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाले जनाएको छ ।
च्याङ्लीका पाँच जनाको कोरोना नेगेटिभ, आरुघाटका ३४ जनाको स्वाब संकलन
पालुङटार नगरपालिका ७ च्याङ्लीका एकै परिबारका पाँच जनाको पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । गत
धान कुट्ने मिलले भीमसेन थापा गाउँपालिका ३ तान्द्राङका इश्वरी लामिछानेको हात मिलले टुक्र्याइदिएको छ ।
सुवासचन्द्र आचार्य : पछिल्लो पटक मिति २०७६।२।१७ गते बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले मिति २०७६।१२।११ गतेबाट